किष्ट मेडिकल कलेजमा कर्मचारी आन्दोलित, इमर्जेन्सी बाहेक सबै सेवा ठप्प | Hamro Doctor News
मंगलबार, २१ असार २०७९ /
डा. मिश्रा १२ औं तहमा बढुवा
सक्रिय संक्रमितको संख्या ४ सय १,थप ९० जनामा संक्रमण पुष्टि
चोट लागेको कति घन्टाभित्र रिप्लान्टेन्सन गर्ने ? डा.जैसवालको यस्तो छ सुझाव (भिडियोसहित)
विदेशी चिकित्सकको नेपालमा दर्ता तथा अभ्यासको व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन : काउन्सिल
सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट सक्न गुपचुपमा ‘तारा छनोट’ कार्यक्रम
किष्ट मेडिकल कलेजमा कर्मचारी आन्दोलित, इमर्जेन्सी बाहेक सबै सेवा ठप्प
By Ashok Maharjan
काठमाडौं,७ पुष । किष्ट मेडिकल कलेजमा कर्मचारीहरुले विभिन्न मागहरु राखी अस्पतालका इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवाहरु ठप्प पारेका छन् । अस्पतालका कर्मचारीहरुले विभिन्न १५ सुत्रीय माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । अस्पताल प्रशासनले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै ८ दिनदेखि इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द गरी कर्मचारीहरु धर्ना बसिरहेका छन् ।
अस्पतालमा कार्यरत करिब पाँचसय कर्मचारीहरुले काम ठप्प गरी अस्पतालको प्राङगणमा धर्ना बसिरहेका छन् । गत असार २० गते अस्पताल प्रशासनलाई कर्मचारीहरुको मागका बारेमा विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएको तर पटकपटक वार्ता गर्दा पनि अस्पतालले मागप्रति बेवास्ता गरेको वार्ता कमिटीका सदस्य सानुभाई न्यौपानेले बताए ।
महिनौदिनसम्म कुर्दा पनि प्रशासनले माग सम्बोधन गर्ने नदेखिएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । पुष २ गतेदेखि कर्मचारीहरुले इमर्जेन्सी बाहेकका ओपिडी र प्रशासनिक कामहरु बन्द गरेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारी सानुभाईले भने हामीले विभिन्न १५ सुत्रीय माग राख्दा अस्पताल प्रशासनले हाजिर गर्न बन्द गरिदिए, त्यसैले अस्पतालमा कार्यरत करिब पाँचसय कर्मचारीले हाजिर गरेको छैन् ।
श्रम कार्यालय र अस्पताल प्रशासनसँगको पटकपटकको वार्तामा पनि निष्कर्ष ननिस्केपछि सम्पूर्ण कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
तलब बृद्धि, कल्याणकारी कोष, कर्मचारीलाई गाडी भाडा, बिभिन्न बिदाहरु ब्यवस्था, जोखिम भत्ता लगायतका १५ सुत्रीय माग राखी कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् ।
Last modified on 2017-12-23 10:42:45
हाम्रो डक्टर न्यूजका मल्टिमिडिया सम्वाददाता महर्जन स्वास्थ्य बीटका विभिन्न आयाममा फिचर लेख्छन् ।
Kist Medical Collage Hospital
जन्डिस भएमा के खाने, के नखाने ?
पिनासको घरेलु उपचार